ovāda – Dhammadīpa
Tag Archives: ovāda
Māgha Pūjā 2019
Posted on 20 Mar 2019 by Ashin Sopāka
From Buddhanet: “Magha Puja Day takes places on the full moon day of the third lunar month (March). This holy day is observed to commemorate an important event in the life of the Buddha. This event occurred early in the Buddha’s teaching life.
“After the first Rains Retreat (Vassa) at the Deer Park at Sarnath, the Buddha went to Rajagaha city where 1250 Arahats,(Enlightened saints) who were the Buddha’s disciples, without prior appointment, returned from their wanderings to pay respect to the Buddha. They assembled in the Veruvana Monastery with the two chief disciples of the Buddha, Ven. Sariputta and Ven. Moggalana.
“The assembly is called the Fourfold Assembly because it consisted of four factors: (1) All 1250 were Arahats; (2) All of them were ordained by the Buddha himself; (3) They assembled by themselves without any prior call; (4) It was the full moon day of Magha month (March).”
“Not doing anything wicked
“Patience is the supreme austerity,
“Not finding fault and not hurting,
is the teaching of the Buddhas.” Dhp 183, 184, 185
etaṁ buddhāna sāsanaṁ.
“Khantī paramaṁ tapo titikkhā,
“Anūpavādo anūpaghāto ,
Pātimokkhe ca saṁvaro;
“မကောင်းမှုဟူသမျှကို မပြုရာ၊ ကုသိုလ်နှင့် ပြည့်စုံစေရာ၏။ မိမိစိတ်ကို ဖြူစင်စေရာ၏။ ဤသည်ကား ဘုရားရှင်တို့၏ အဆုံးအမတော်ပေတည်း။
“တိတိက္ခာဟု အမည်ရသော သည်းခံမှု ခန္တီသည် မြတ်သောအကျင့်တည်း။ နိဗ္ဗာန်ကို အလွန်မြတ်၏ဟု ဘုရားရှင်တို့ ဟောတော်မူကုန်၏။ ရဟန်းဟူသည် သူတစ်ပါးကို မညှဉ်းဆဲ၊ သူတစ်ပါးကို ညှဉ်းဆဲသောသူသည် ရဟန်း မဟုတ်။
“သူတစ်ပါးကို မကဲ့ရဲ့ မစွပ်စွွဲရာ မညှဉ်းဆဲရာ၊ပါတိမောက္ခသံဝရသီလကို စောင့်ရှောက်ရာ၏။ စားဖွယ်၌ အတိုင်းအရှည်ကို သိရာ၏။ ဆိတ်ငြိမ်သော ကျောင်း အိပ်ရာနေရာသို့ ကပ်ရောက်နေထိုင်ရာ၏။ သမာပတ်ရှစ်ပါးဟူသော အဓိစိတ္တ သိက္ခာကို ပွါးများအားထုတ်ရာ၏။ ဤသည်ကား ဘုရားရှင်တို့၏ အဆုံးအမတော်ပေတည်း။”
“Không làm mọi điều ác.
“Chư Phật thường giảng dạy;
Posted in Dhamma, Monasticism	| Tagged bhikkhu, dhamma, ovāda, patimokkha